Ngaba ugqoke iiglovu ze-Ski Boot?
Ukuba ubonile abathile be-skier ngeempahla ezimbi ezimnyama ezibhotsheni zabo, mhlawumbi unokuba uzibuza ukuba ziphi na, kwaye ukuba ziyasebenza. Iiglavu ze-Ski boot, ezibizwa nangokuthi "i-bootgloves," zifaka izibambiso ezingenayo i-neoprene ezithintela phezu kweenqwanqwa kunye neenqwelo zangaphambili zamabhotshi akho, zifaka ngeenxa zonke ukuba zihlale zikhuselekile. Zizo zombini zomoya kwaye zingenawo amanzi ukuze kugcinwe iibhotile zakho ezikhuselekileyo kwiimozulu ezibi.
Ngaba iiglovu ze-Ski Boot zihlala zifudumele?
Abanye abakwi-skier bafunga iiglavu ze-ski boot, abanye bangabathabatha okanye bawashiye. I-DryGuy, omnye wabenzi abakhulu beiglavu ze-ski boot, zibiza ukuba iBootGlove ™ yazo idibanisa ukuya kuma-20 ° F kwibhokisi lezinyosi.
Kwimeko yokuvavanywa kwintsimi e-Alaska, iqela leDryGuy lithumele i-skier test nge-boot eyodwa-up, enye yahamba. Ngokutsho kweDryGuy, emva kokusuka kweenyawo ezili-1,300, i-skier's boot ne-BootGlove ™ yayingu-53 ° F efudumele kuneyona nto evezekileyo.
Ngaba iiglofu ze-Ski Boot zifanele ukuthenga?
Ininzi iiglavu zebhokisi azibizi kakhulu kangangokuba zixabiso elincinci kunezixhobo zokushisa eziqhutywe ngebhetri, ezivame ukubiza i-$ 200. Kukho izinto zokugcina engqondweni ngaphambi kokuba uthenge, nangona kunjalo. Okokuqala, kufuneka uhlaziye iindlela ezahlukeneyo zokukhusela iinyawo ezibandayo ngelixa usuqaqa . Ukuba ufika ucinga iiglavu ze-ski boot zilungele wena, ngokulandelayo, zibuze:
Ngaba udla ngokukhawuleza kwamaqondo okushisa amanani? Abaninzi bezulu basichazela ukuba iiglavu ze-ski boot aziyiyo isisombululo somlingo kwizwane ezithintekayo, kodwa zenza umehluko kwimozulu embi. Ukuba udla ukunqumla kumaqondo okushisa ngaphezu kweqhwa, ungasifumani ukuba iiglavu ze-ski boot zenza umehluko omkhulu kwiinyawo zakho.
Ingaba uyazikhumbuza iibhotile zakho phakathi kweebhola? Abanye abakwi-skier abathanda iibhothi zabo ezinkulu-snug baya kufaka izikhwebu zabo kwiphakamiso ukuze banikeze ukukhululeka okuphakathi. Ukuba ungomnye wala maqhekeza, iiglavu ze-boot azikho kuwe, njengoko awuyi kukwazi ukufikelela kwiimfumba zakho.
Ngaba uhlala ufanele uhlengahlengise i-ski boot buckles yakho? Ukuba unamabhotile afuna ukunyamekela kwimihla yakho, iiglafu ze-ski boot zingapheli kukukhungathekisa ngaphezu kwanoma yini enye.
Ngaba iinyawo zakho zihlala zibandayo? Ukuba unomjikelezo ompofu okanye uvele ufumaneke ezinyaweni ezinqabileyo, izigulane ze-ski boot ziza kunceda, kodwa aziyi kunika imfudumalo enokuthi ucinga. Ukuba ufuna ukufudumala - kungekhona nje ukukhusela kubanda - ungathanda ukucinga ngokutshala imali kwi- heat boot heaters .
Ndingayithenga phi iGants Boot iGants?
Uninzi lweevenkile ze-ski gear zithengisa iiglavu ze-boot , kwaye i-REI ngumtshatsheli oqhubekayo we-DryGuy BootGlove ™. Izitolo zokunciphisa ezifana neTJ Maxx kunye noMarshall ziyaziwa ngamanye amaxesha zithwala iiglavu ze-ski boot, kuxhomekeke kwixesha.
Iingcebiso zokusebenzisa iiglovu ze-Ski Boot
Beka iiglavu zakho ze-ski boot ngaphakathi, xa iibhothi zakho zifudumele. Ngaphandle koko, iiglavu ze-boot aziyi kubakho ukufudumala ukutywinwa.
Ukuba iiglavu zakho zebhobhothi ziya kubanda kwaye zixhamle ngaphandle apho, zikhuphe ngexesha lesidlo ukuze zome. Ngaloo ndlela, iibhothi zakho ziyakwazi ukufudumala kwakhona, kwaye unako ukubeka iiglavu zokukhupha izibilini xa zakho iinzwane ziyi-toasty kwakhona. Ukuthatha iiglavu zakho kwixesha lesidlo kuzakukhusela nayiphi na iqhwa ukuxhamla kwiiglavu zebhokisi kwaye kubangele ukuba zimanzi.
Ukuba iiglavu zakho ze-ski boot zixakekile, zikhuphe iintsuku. Iiglavu ze-Boot zifanelekile ukuba zingabi namanzi, kodwa xa usuqaqa emanzini, iimeko ze-slushy, kukho ithuba lokuba amanzi aphumelele. Ukuba kunjalo, baxake ephaketheni lakho, kuba xa bexakekile, abayi kusebenza.
Jonga ngokukhawuleza kwidatshuthi ye-gloot ye-gloot ngaphambi kokuthenga, kwaye qi ni sekise ukuthenga ubungakanani obufanelekileyo. Isigulane se-ski boot esisikhululekile asiyi kunceda ekubambeni ukufudumala, kunye nesiglavu esiphezulu se-ski boot esomeleleyo kakhulu kunokubangela ukuphazamiseka okuphazamisayo kwibhokisi lakho leeyonto.
I-PowerStik I-Golf Weighted Trainer Trainer
I-Titleist's Forged 695MB, 695CB kunye ne-775.CB Irons
Imfazwe yeJenkins Indlebe: I-Admiral Edward Vernon
IsiFrentshi rhoqo -IIzenzi
Unyaka weeNgqungquthela ezikhethekileyo-2008 I-Special Musting Ford Mustang
Iintshukumo zothando zoLutsha
ULeo and Virgo: Uthando lwabo luhambelana
I-American Revolution: Ukuvinjelwa kweT Fort Ticonderoga (1777)
Izambatho - Imbali yeMpahla kunye neFibers ezahlukeneyo
Ukuqonda ukuphumelela kweMvelo
Iikhikhsi zeSikhism ezithobela ukuqokelela i-Recipe Divine
Ukudibanisa kweeVenbshi zaseSpain kwixesha elikhoyo
Inguqulo kaRoy Black ye "Jingle Bells" ngesiJamani